JW Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Ọktoba 2016
Ajụjụ: Ụfọdụ ndị na-eche na Jizọs abụghị mmadụ dịrị ndụ n’ụwa a. Ma, o nwere ndị kwetara na Jizọs dịrị ndụ n’ụwa a, nweekwa ndị nke sị na ha amaghị. Olee ihe gịnwa chere?
Otú a ga-esi enye ya: Teta! a kwuru ihe ndị ga-enyere gị aka ịma nke bụ́ eziokwu.
Ajụjụ: Gịnị na-eme mmadụ ma ọ nwụọ?
Amaokwu Baịbụl: Jọn 11:11-14
Eziokwu: Mmadụ nwụọ, onye ahụ anwụchaala. N’ihi ya, anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ihe ga-eme anyị ma anyị nwụọ. Jizọs ji ọnwụ tụnyere ụra. O nwere ike ịkpọte ndị nwụnahụrụ anyị ka ha dịrịkwa ndụ n’ụwa otú ahụ ọ kpọtere Lazarọs.—Job 14:14.
AKWỤKWỌ ỊKPỌ ÒKÙ ỌMỤMỤ IHE (inv)
Otú a ga-esi enye ya: O nwere okwu a ga-ekwu n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ebe anyị na-anọ efe Chineke. M na-akpọ gị ka ị bịa gere okwu ahụ n’akwụghị ụgwọ ọ bụla. [Nyezie ya akwụkwọ ịkpọ òkù ahụ. Gosi ya ebe e dere oge na ebe anyị na-enwe ọmụmụ ihe ngwụcha izu, gwakwa ya isiokwu okwu ihu ọha a ga-ekwu.]
Ajụjụ: Ị̀ bịatụla ọmụmụ ihe anyị mbụ? [I nwere ike igosi ya vidio bụ́ Gịnị Ka A Na-eme n’Ụlọ Nzukọ Alaeze?]
Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Ọktoba 2016
mailto:?body=Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Ọktoba 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016362%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe E Nwere Ike Ikwu n’Ozi Ọma n’Ọnwa Ọktoba 2016
Nke 5 n'Afọ 2016 Jizọs Ọ̀ Bụ Mmadụ Dịrị Ndụ n’Ụwa A?
Akwụkwọ Anyị Ji Akpọ Ndị Mmadụ Ka Ha Bịa Ọmụmụ Ihe Anyị